Maamulka Trump Oo Diiday In Uu Farta Ku Fiiqo Ciddii Mas’uulka Ka Ahayd Dilkii Wariye Jamaal Khashoggi | somalilandtoday.com
← Maxkamad Ku Taalla Kenya Oo Amartay In La Sii Daayo Ajaanib Lala Xidhiidhiyey Kooxda Al-Shabaab
“Shiinahu Waa In Uu Wax Ka Baddelaa Qaabka Uu Ula Dhaqmo Muslimiinta Dalkiisa” Dawladda Turkiga →
Maamulka Trump Oo Diiday In Uu Farta Ku Fiiqo Ciddii Mas’uulka Ka Ahayd Dilkii Wariye Jamaal Khashoggi
(SLT-Washington)-Maamulka madaxweyne trump ayaa diiday in uu ka jawaabo codsi uga yimid aqalka Congress-ka oo ku aaddan in la soo saaro warbixin caddaynaysa ciddii ka dambaysay dilkii Wariyihii Sacuudiga u dhashay ee Jamal Khashoggi.
Wakiilada aqalka Congress-ka ayaa bishii October gudbiyey qoraal ay ku dalbanayaan in baadhitaan lagu sameeyo dilkaas iyo in Aqalka Cad uu faahfaahin dheeri ah ka bixiyo arrintaas.
Mas’uul katirsan Maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in madaxweynuhu uu xaq u leeyahay in uu diido in arrintaas uu gacan ka gaysto.
Khashoggi ayaa la dilay bishii October ee sanadkii hore kadib markii uu galay qunsuliyadda uu Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul.
Waxa uu ahaa nin aad u dhaliila xukuumadda Sacuudiga. Maydkiisii ayaa la sheegay in la jarjaray ilaa iyo haddana lama hayo meel la geeyey.
Saraakiisha sirdoonka Maraykanka ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in hawgalka noocaas oo kale ah uu ahaa mid u baahan in uu oggolaado Dhaxal Sugaha dalkaas Maxamed bin Salman.
Hase ahaatee Saraakiisha Sacuudiga ayaa ku adkaysanaya in wariyahaas ay dileen koox arxan laaweyaal ah oo katirsan sirdoonka Sacuudiga kuwaas oo aan ku socon amar ka yimid Dhaxal Sugaha.
Xoghayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo ayaa qoraal u diray hoggaamiyeyaasha golaha senate-ka oo uu ku sheegay in tallaabo laga qaaday dad lagu tuhunsan yahay dilka.
Qoraalka Pompeo uu u gudbiyey senate-ka laguma xusin ciddii masuulka ka ahayd dilkii Khashoggi, waana arrinttaas midda ay dalbanayaan golaha senate-ku.
Maraykanka ayaa cunaqabatayn kusoo rogay 17 sarkaal oo Sacuudiyaan ah, oo uu kamid yahay Saud al-Qahtani, oo ahaa la taliyihii hore ee Dhaxal Sugaha oo la sheegay in uu qayb ka ahaa qorshaynta iyo fulinta hawgalka lagu dilay Khashoggi.
Hase ahaatee golaha senate-ka ayaa Mr Trump ku dhaliilay in uu ku guuldarraystay in dilka Wariyaha uu si toos ah dusha ugu saaro Dhaxal Sugaha.